Rita, Writing for My Sake!: Written Record (1)
Posted by Rita at 1/27/2010 11:51:00 PM
Thanks for sharing, Rita. :)
၈) * Telephone ထူးတဲ့ အသံဟာ စိတ်လိုလက်ရ ခွန်အားရှိတဲ့အသံ ဖြစ်ပါစေ။ )
- ( အရင် အလုပ်တုံးက ကိုယ့် ဂျပန် MD က သင်ပေးဖူးတယ်ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာ မင်းမျက်နှာကိုပြုံးထားပြီးပြောသင့်တယ်တဲ့။
အဲဒီ အပြုံးဟာ တစ်ဖက်သားဆီကို ကူးစက်သွားမယ်၊
မပြောဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ ။ဘယ်လိုပြဿနာရှာတဲ့ customer ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆက်ဆံရမယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်တွေ တွေ့ လိုက်ရင် “ဟိုက် ဟိုက်“ နဲ့ ချိုနေတာထင်ရဲ့ ။
ဂျပန်တွေဟာ ပြုံးဖို့မေ့နေတဲ့လူတွေလို့ အိုဆာကာမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ အစ်မတယောက်ပြောဖူးတယ်။
ကိုယ်ကတော့ ဘာကိုမဆို စိတ်ပါလက်ပါပဲ။ ရန်လိုရင်လည်း စိတ်ပါလက်ပါ။ ဒေါသထွက်ရင်လည်း စိတ်ပါလက်ပါ။ အတက်ခ်လုပ်ရင်လဲ စိတ်ပါလက်ပါ။
ဥပေက္ခာကပြုထားပြီဆိုရင်လည်း အရှင်းပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ သေရင်သေသွားပစေ သဘောထားပြီးသားဆိုတော့ ဘာကြီးလာပြောပြောနေနေ ကြောက်မှာလဲ မဟုတ်တော့ စိတ်ပါလက်ပါကို against တော့တာပဲ။
တေဇာရေးတဲ့ တောမီး ဖတ်ဖူးလား။ ဒေါသကို လျှော့လိုက်ပါ ဆိုတဲ့စကားတွေက ဒေါသကို ပိုပို ဆွပေးတယ်ဆိုတာ...
မယုံမရှိနဲ့။ တန်ရာတန်ရာပဲ ပေးတာကောင်းတယ်။
ဘယ်နယ့် အားနေရင် မောင် ကိုကို မရီတာ
(ကိုယ်ကတော့ မကျန်သလိုလို ဆရာလုပ်ပြောသွားသည်)